Akwụkwọ ọgụgụ Onye Kraịst: Oziọma, Nsọ, echiche Padre Pio na ekpere ụbọchị: Eprel 24, 2021 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Eprel 24, 2021
Eprel 24, 2021. Oziọma nke tata a na-emechi nkuzi mara mma ma miri emi banyere achịcha nke ndụ (lee Jọn 6: 22–71). Ka ị na-agụ nkuzi a site na mmalite ruo na ngwụcha, o doro anya na Jizọs na-esi n'okwu ndị ọzọ gbasara achịcha nke ndụ dị nfe dị mfe ịnabata n'okwu ndị akọwapụtara nke na-esiri ike. O mechiri nkuzi ya tupu ozi oma nke taa site na isi: “Onye obula riri aru m, drinksu kwa obaram, o nogide n’ime m, mu onwem n’ime ya”. Mgbe Jizọs kwuchara ihe a, ọtụtụ ndị gere ya ntị hapụrụ ya, kwụsị iso ya.
Agabiga ụbọchị nke ozi Eprel 24, 2021. N’ihi ya, ọtụtụ n’ime ndị na-eso ụzọ ya laghachiri n’ụzọ ndụ ochie ha ma kwụsị iso ya jee ije. Jizọs wee gwa mmadụ iri na abụọ ahụ, sị: "younu chọkwara ịla?" Jọn 6: 66–67
E nwere echiche mmadụ atọ zuru oke ndị mmadụ nwere n'ebe Kasị Nsọ dị Nsọ. Otu àgwà bụ nke inwe okwukwe miri emi. Ọzọ bụ nke enweghị mmasị. Na nke atọ bụ ihe anyị na-ahụ n'Oziọma taa: ekweghị ekwe. Ndị kpafuru akpafu n’ebe Jizọs nọ n’Oziọma nke taa mere otú ahụ n’ihi na ha kwuru, sị: “Okwu a siri ike; onye nwere ike ịnabata ya? Kedu okwu mara mma na ajụjụ ịtụgharị uche.
Ọ bụ eziokwu, n'ụzọ ụfọdụ, na nkuzi Jizọs na Ebe Nsọ Kachasị Nsọ Nsọ bụ okwu na-agba ume. "Siri ike", Otú ọ dị, ọ bụghị ihe ọjọọ. Obu ihe siri ike bu na ikwere na Oriri Nsọ bu ihe g’eme site n’okwukwe nke sitere na nkpughe di omimi nke Chineke. mbuọtidem. Ha dabere kpam kpam na ọgụgụ isi ma, ya mere, echiche iri anụ na ọbara nke Ọkpara Chineke karịrị ihe ha nwere ike ịghọta. Ya mere, onye ga-anakwere nkwupụta dị otú ahụ? Naanị ndị gere Onyenwe anyị ntị ka ọ na-agwa ha okwu n’ime. Ọ bụ naanị na nkwenye ahụ dị n’ime nke sitere na Chukwu nwere ike bụrụ ihe akaebe na eziokwu nke Oriri Nsọ.
Ikwenyere na mgbe ị na-a whatụ ihe dị ka "achịcha na mmanya", na ị na -eri Kraịst n'onwe ya? Ghọtara nkuzi a nke Dinwenu anyị maka achịcha na-enye ndụ? Ọ bụ okwu na-akụda mmụọ na nkuzi siri ike, nke mere na a ghaghị iji ya kpọrọ ihe. Maka ndị na-ajụghị nkuzi a kpam kpam, enwekwara ọnwụnwa ịbụ onye enweghị ntakịrị mmasị na nkuzi ahụ. Enwere ike ịghọtahie ya n’ụzọ dị mfe na ọ bụ naanị akara ngosi dị n’otu Onyenwe anyị si ekwu okwu. Ma akara ngosi abụghị nanị akara. Ọ bụ nkuzi miri emi, na-akpali akpali ma na-agbanwe ndụ banyere etu anyị si ekerịta Chineke na ndụ ebighi ebi nke Onye-nwe-anyị chọrọ inye anyị.
24bọchị 2021 Eprel XNUMX. Tugharịa uche taa banyere otú i kwenyesiri ike n'okwu ọjọọ a Jizọs kwuru. Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ okwu "siri ike" kwesịrị ime ka inyocha okwukwe gị nke ọma ma ọ bụ enweghị ya. Ihe Jizọs na-akụzi na-agbanwe ndụ mmadụ. Ọ na-enye ndụ. Ma ozugbo a ghọtara nke a nke ọma, a ga-ama gị aka ka i were obi gị nile kwere ma ọ bụ tụgharịa na nkwenye. Kwe ka onwe gi jiri obi gi nile kwere na Eukaristia di aso karie, I gha achota na ikwere n’otu n’ime ihe omimi di omimi nke Okwukwe. Gụọ kwa Gwọọ Padre Pio ozugbo, ọ na-azọpụta ezinụlọ ahụ dum
Ekpere nke ụbọchị
Onye nwem di ebube, ihe I na-akuzi n’Onye Nsọ kacha asọ nsọ karịrị nghọta mmadụ. Obu ihe omimi di omimi nke na anyi agaghi enwe ike ghota onyinye di oke onu ahia a. Meghee anya m, onyen’anya nke oma, ma gwa m uche ka m nu okwu gi ma jiri okwukwe miri emi zaghachi. Jesus ekwere m na gị.
Echiche Padre Pio: Eprel 24, 2021
O bu ihe nwute, onye iro gha aghaghi aghari ayi, ma ka ayi cheta na Virgin ahu n’eche ayi nche. Ya mere, ka anyị kwado onwe anyị nye ya, ka anyị tụgharịa uche na ya ma anyị kwenyesiri ike na mmeri ahụ bụ nke ndị tụkwasịrị nne ukwu a obi.
A na-echeta Eprel 24 San Benedetto Menni
Benedetto Menni, nke a mụrụ Angelo Ercole bụ onye weghachi Sanwụ Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) ụlọ ọgwụ na Spain, yana onye guzobere na 1881 nke ụlọ ọgwụ Smụ nwanyị nke Obi Dị Nsọ, ọkachasị raara nye enyemaka nke ndị ọrịa psychiatric. Amụrụ na 1841, ọ hapụrụ ọkwa ya n'ụlọ akụ iji rara onwe ya nye, dị ka onye na-ebugharị ihe, nye ndị merụrụ ahụ na Agha nke Magenta. Banyere n'etiti Fatebenefratelli, e zigara ya na Spain mgbe ọ dị afọ 26 na ọrụ na-agaghị ekwe omume nke iweghachi Order, bụ nke egbochiri. O nwere ihe ịga nke ọma site na otu puku ihe isi ike - gụnyere ikpe maka ebubo iji mebie nwanyị na-arịa ọrịa uche, nke kwụsịrị na ikpe nke ndị nkwutọ - yana n'ime afọ 19 dị ka mpaghara, ọ tọrọ ntọala 15 N'echiche ya, a malitekwara ịmụ ezinụlọ na Portugal na Mexico. Ọ bụ mgbe ahụ ka onye ozi nke Apostol na Order yana onye isi ọhaneze. Ọ nwụrụ na Dinan na France na 1914, mana ọ zuru ike na Ciempozuelos, na Spain ya. Ọ bụ onye nsọ kemgbe 1999.
Ozi si na Vatican
N'eme emume aha ya, oriri nke St George, Pope Francis bụ nke narị narị ndị bi na Rome na ndị na-elekọta ha anya. Popu, aka Jorge Mario Bergoglio, mere emume ncheta ọmụmụ ya na Eprel 23 site na ịga leta ndị bịara Vatican maka ọgwụ nke abụọ nke ọgwụ mgbochi COVID-19 ha. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 600 ga-enweta ọgwụ mgbochi ọrịa ụbọchị niile. Foto ndị popu na ndị ọbịa pụrụ iche na nke Kadịnal Konrad Krajewski, onye papal na-eme ebere.
Akụkọ a na-egosipụta ike nke Aha Nsọ nke Jizọs
You chọrọ ka Angel nke na-eche gị n'akụkụ gị? Nke a bụ otu esi ekpegara ya ekpere